गोकर्ण रिसोर्टको जग्गालाई यतिलेभन्दा ५० करोड बढी म तिर्छु, सरकारले मलाई दिन्छ?(भिडियो सहित) - हिमाल दैनिक
गोकर्ण रिसोर्टको जग्गालाई यतिलेभन्दा ५० करोड बढी म तिर्छु, सरकारले मलाई दिन्छ?(भिडियो सहित)
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचारु नभए राष्ट्रियसभाको बैठक पनि बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्रतिनिधिसभालाई सत्तारुढ नेकपाले बन्धक बनाएको आरोप लगाउदै सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचारु नभए आफुहरुले राष्ट्रियसभाको बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए । उनले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न नसक्दा जनताको अधिकार नै हनन भएको तर्क गरे ।
त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवार आउन छोडेर सरकारी निवास बालुवाटारबाटै शासन चलाईरहेको आरोप पनि लगाए। आफ्नो कार्यालयबाट दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न नसके सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय बन्द गर्न उनले सुझाव दिए।
प्रधानमन्त्रीको निवास हो बालुवाटार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होइन बालुवाटार,
सिंहदरबारको आवश्यता परेन भने सिंहदरबारमा ताला लगाउने हो कि? प्रधानमन्त्री सुत्ने ठाउँमा मिटिङ गर्ने, भेटघाट गर्ने, अब प्रधानमन्त्रीले बाल्यकालमा लगाएका बस्त्रहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा राख्ने हो?
त्यस्तै उनले यती होल्डिङ्सले दिएको भन्दा ५० करोड बढी आफूले तिर्ने भन्दै गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा आफूलाई दिन प्रस्ताव गरे ।
गोकर्ण रिसोर्टको जग्गालाई यतिलेभन्दा ५० करोड बढी म तिर्छु, सरकारले मलाई दिन्छ?
त्यो गोकर्ण रिसोर्ट जति पैसामा दिएको छ त्यो भन्दा ५० करोड बढी म तिर्न तयार छु। सरकार दिन तयार छ मलाई?
सांसद रायमाझीले आफूहरुले देशको प्रधानमन्त्रीका रुपमा देख्न चाहेको तर ओलीले एउटा निजी कम्पनीको कार्यकारी निर्देशकले झै काम गरेको आरोप लगाए ।
बैठकमा सांसद कोमल वलीले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताईन । एमसिसीलाई सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरिसकेकाले अब संसदबाट पारित गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
एमसिसीबाट सहयोग लिने अरु मुलुक पनि छन् के ति सबै अमेरिका भए त?
हामी अनुदानमा मा चल्ने मुलुक हौ। यत्रो एक मुष्ठ अनुदान दिदैछ…यस्तो पाराले त भविष्यमा सहयोग गर्लान् जस्तो लाग्दैन
त्यस्तै सांसद बिमला राई पौडेलले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेर काम गर्ने कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न माग गरिन् । एक पटक लोकसेवा पास गरेपछि जीवनभर कामै नगरी जागिर खान पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सांसद राजकुमार कुँवरले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको भन्दै घाइते योद्धालाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशु मधेशी गुरुङले ‘संघ,प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक,२०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गरेका थिए । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रस्ताव गरेको ‘रेल्वे विधेयक,२०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको ‘अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धी अन्तर्गतको पार्लेमो अभिसन्धी’स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोमबार दिउसो १ बजे बोलाइएको छ।
Prevपछिल्लोसभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नेकपा सचिवालय बैठक शुरु
अघिल्लोप्रदेश नं ५ को हिउँदे अधिवेशन शुरुNext